Ụdị agba agba na ejiji ejiji 2018 - usoro kachasị ọhụrụ na usoro maka mkpụmkpụ, ogologo na ogologo ntutu, maka blondes na brunettes
Ịgba agba agba ejiji 2018 - nhọrọ nke foto nke nhọrọ kachasị mma maka afọ a
Iji nọgide na-emekarị, ọ bara uru ịmara ihe ndị dị ugbu a na-emetụta ọ bụghị nanị iji dobe ihe, akpụkpọ ụkwụ na ngwa ngwa, kamakwa ụlọ ọrụ mara mma. Na oge ọ bụla, ntụziaka ndị a gbanwere n'ụzọ doro anya. Ya mere, agba agba agba ejiji 2018 emewokwa mgbanwe dị ukwuu.
Uwe agba agba 2018 - ejiji ejiji
Ihe osise mara mma ma na-adọrọ adọrọ nke 2018, àgwà ndị na-ewu ewu na nke dị iche iche, nwere ike iju onye ọ bụla anya, ọbụna onye na-ewu ewu. N'oge a, ndị na-edozi isi nwere ike inye ndị na-azụ ahịa ha ndị na-eme ka ndị na-azụ ahịa ha nwee ike ịchọta ụdị ụcha nke agba mbọ dịka o kwere mee, na ngwọta ndị na-abụghị nke a ga-ahapụ onye nwe ha.
Ịgba agba agba ejiji 2018 maka ntutu isi
Ịhọrọ agba maka obere ntutu 2018, ekwesịrị ịghọta na isi ọrụ nke ịgbanwe agba nke ntutu isi oge a na-enye ya ụda olu. Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị nna ukwu nke nkà na-edozi isi na-ahọrọ ndị nwe usoro mgbagwoju anya nke ịgba ọkụ na mmụba, na-enye ohere ime obere mgbanwe na mbiet ahụ ma nye onye na-eji ntutu isi mmetụta nke nsị dị mfe.
Ihe eji agba agba agba 2018, nke na eriri dị iche iche gbanwere agba ha, a na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ naanị na Ụlọ Mmanya ọrụ, n'ihi na n'ụlọ, enwere ohere dị ukwuu iji kwatuo bọọlụ ma nweta ụdị ntutu na-adịghị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ndị ejidere obere oge n'oge a nwere ike iji otu eserese na-acha odo odo ma ọ bụ agba aja aja.
Maka umuaka ndi a choro igosiputa ndi mmadu ha, agba ocha nke eji eme ihe n'afo 2018 na ihe ndi mmadu kwesiri ime. Mgbe ị na-ahọrọ nhọrọ a, ị nwere ike inye ihe kachasị mmasị na agba - agba agba agba nke otu nwa na-acha ọcha, odo odo, emerald green na ụda ndị ọzọ. Ihe kachasị mkpa bụ ịghọta ọnọdụ ndị dị otú ahụ dịka onye na-edozi isi. Ya mere, umuaka umuaka na umuaka ndi choro uzo mara nma n'uwe , a na akwado ya ka o ghara icho oke ozo.
Ejiji agba agba agba 2018 na ọkara ntutu
A na-ewere usoro ntụgharị n'ogo n'ogologo dị ka ihe kachasị mma maka nhazi na agba. Na ntutu dị otú a, ị nwere ike ime ihe ọ bụla, ya mere ọkachamara ọ bụla ruru eru n'oge ọhụrụ ahụ ga-enye onye ahịa ya ọtụtụ nhọrọ dị mma. Ụdị ejiji nke 2018 maka ọkara strands bụ dịgasị iche iche, mana n'ọtụtụ ọnọdụ usoro ndị a na - ahọrọ:
nyocha . Ụzọ eji agba agba, nke mgbọrọgwụ ya na-adịghị edozi, a na-eme ka eriri ndị ahụ pụta ìhè n'usoro ikpo ọkụ, na-ebute mmetụta dị ọkụ. Ụzọ kachasị mma nke usoro a bụ iji nweta ọkwa ọzọ a na-ahụ anya, nke dị ezigbo mkpa maka ndị nwe ya abụghị oke ntutu isi. Karịsịa nke ọma agbaji agba agba 2018 na usoro balage elele ndị nwunye ụlọ na multilayered haircuts - ladder, cascade ma ọ bụ textured agwa;
sombra - usoro na-adọrọ mmasị nke agba agba nke na-eji nwayọọ nwayọọ na-agagharị. Adabara ma platinum blondes na ọkụ brunettes;
mgbọrọgwụ gbara ọchịchịrị . Ufodu di na agba ocha n'afo 2018 n'ime afo ole na ole gara aga adi ka umuaka nke ejiji. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, oge a kachasị ewu ewu bụ ịkọwapụta akara nke ndị nwe ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, bụ nke mgbọrọgwụ, n'ụzọ dị iche, na-ese na agbarịrị gbara ọchịchịrị. Mmetụta ebumpụta ụwa nke mgbọrọgwụ tojuru na-acha anya na nke mbụ, ya mere ọ ga-amasị ọtụtụ ụmụ agbọghọ.
Ejiji agba ajị agba 2018 maka ogologo ntutu isi
Ndị nwere ogologo ntutu isi na oge ọhụụ na-ada mbà n'obi ịhọrọ otu ụdị nke na-acha ọcha. Ibe nke ogologo ntutu 2018 na - enye ohere dị ukwuu maka mmezu nke fantasy - ụdị dị iche iche nke onyinyo, egwu nke ụzarị ọkụ, mgbagwoju anya nke transitions, ọtụtụ ihe na-egbuke egbuke na ọtụtụ ndị ọzọ nabatara ebe a.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị nwe ogologo curls họrọ usoro mmemme - ombre ma ọ bụ sombra. Ụzọ ndị dị mma isi gbanwee agba, bụ nke mmetụta nke ọkụ ọkụ, - zuru ma ọ bụ balage. Na mgbakwunye, na 2018, ịnwere ike ịnwale na ntutu gị n'enweghị ihe ọ bụla - iji mee ka ọdịdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche, usoro ndị na-egbuke egbuke na nke dị iche iche, mmetụta nke powdered ntụ ntụ, ọtụtụ ụja na ihe ndị ọzọ.
Kedu agba dị mma na 2018?
Họrọ agba nke ntutu maka ọtụtụ n'ime mmekọahụ na-esiri ike. Iji ghara inwe mmechuihu na mkpebi ahụ, ndị isi na-edozi isi na-agwa ụmụ agbọghọ ka ha duzie ọ bụghị naanị site na mmasị onye ọ bụla, kamakwa site na ọnọdụ ndị dị ugbu a. Coloring 2018 dị oke iche iche, yabụ na i nwere ike igosi fantasy ma mepụta foto na-egbukepụ egbukepụ ma dị ebube.
Akara nke blondes 2018
Ojiji nke isi na-enwu na-anọgide na-emekarị. Achịcha ndị na-acha ọcha na-achọ ka ha ghara ịhapụ ụcha nke ụbụrụ ha, na-emelite ma na-eme ka ọ dị ọhụrụ mgbe ụfọdụ, ndị nwe eriri ụda ndị ọzọ na-etekarị isi ha, na-achọ ịchọta ebe mara mma na nke mara mma. Ịgba agba agba ejiji 2018 maka blondes dị iche iche. N'ime nhọrọ ndị kachasị ewu ewu na ndị a ma ama, a ghaghị ịchọpụta dịka:
ájá ájá . Ojiji kachasị mfe ma dị egwu nke na-adabara ụmụ agbọghọ niile. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-eto eto, o yiri ka ọ na-agwụ ike. N'okwu a, ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị na-atụgharị ájá ájá ma ọ bụ na-acha ọkụrị, nke nwere ike ịbụ ihe karịrị iri;
caramel blond . Egwuru egwu ma na-ese onyinyo, nke nwere ike ịhapụ onye nwe ya afọ ole na ole;
platinum . Ịgba agba agba ajị agba 2018 na akwa larịị ga-abaghị uru. Oge a, stylists kwadoro agba a nye ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ karịrị 40;
ájá dị ọcha . Dị ka aha ahụ na-egosi, ejiji agbaji ejiji nke oge 2018 na ndò mbụ a na-emepụta mmetụta nke edozi isi na isi nke na-adịghị ele anya. N'ihi nke a, omume a bara uru naanị maka ndị na-eto eto na-eche nche bụ ndị na-achọ ịdọrọ uche gaa n'ebe onye ha nọ, ma ha adịghị achọ iji oge dị ukwuu na-elekọta onwe ha;
quartz pink . Udo di nwayo na nke ozo di iche iche, nke, Otú o sina dị, a na-atụ aro ịhọrọ ụmụ agbọghọ naanị;
isi awọ . Taa, nhọrọ a na-ewu ewu ọ bụghị naanị n'etiti ụmụ nwanyị nọ n'afọ ha, kamakwa n'etiti ndị na-eto eto bụ ndị na-achọ ịpụ na ìgwè mmadụ ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na agba ọchịchịrị ma ọ bụ zụta ya na oge ọhụụ, a na-atụ aro ka ị nye mmasị na shades oyi, nke ga-abụ ewu ewu. Akpanari agba agba 2018 maka brunettes na-ebelata na nhọrọ ndị a:
bluish nwa . Ụda a bụ ọdịdị na-adịghị agwụ agwụ, nke na-agaghị efunahụ ya. Ka ọ dị ugbu a, na oge ọhụrụ, ọ gaghị enwe ike iso onye ọ bụla ọzọ na - acha anụnụ anụnụ na ihe ndị ọzọ adịghị ekwe;
Burgundy - okpu miri emi nke nwere ike ime onwe ya ma ọ bụ ghọọ nwa;
icha-∫ma-∫k ™ -nd ™ ∫k ™ - ™ ma ™ h® nke ™ ma, nke na-edochi ∫r® nke eggplant.
Coloring nke ntutu isi nchara 2018
Ndị nwere ntutu isi na-acha ajị agba nwere ike ịmị ụcha ha ọ bụla na agba ọ bụla. A na-ahụkarị ndị na-acha odo odo na ndị na-acha anụnụ anụnụ, ndị na-acha odo odo, ndị na-acha uhie uhie na ndị na-agba chaa chaa. Tụkwasị na nke a, ndị inyom nke ejiji nwere ike ịṅa ntị na ngwaahịa ọhụrụ agba agba agba 2018:
agba nke mmiri ara ehi chocolate bụ nwanyị na-enyere ndị inyom dị iche iche aka;
Kọfị bụ ihe a na-emeghị emecha, nke kwesịrị ekwesị maka ịchọ mma ndị na-ete ntutu.
Agba agba uhie 2018
Uwe na-acha uhie uhie nwere ike ịhapụ ihe ọ bụla dịka ọ dị, n'ihi na agba ntutu ha ga-abụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ewu ewu na oge ọhụrụ. Ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịlele nchacha nke 2018, dịka ọmụmaatụ:
acha uhie uhie - onyinyo nke na-egbuke egbuke nke anụ ọhịa n'ezie;
nut - nsụgharị dị nro na nke muffled maka ụmụ agbọghọ na-agba nro na ihunanya;
ọlaedo - ụda maka ndị na-eto eto na ndị na-atụ egwu, na-enye ihe oyiyi nke egwu egwu na ụba.
Ụdị na agba agba 2018
Isi ihe na-emetụ aka na 2018 na-agbasa ọtụtụ oge ndị gara aga. Ịdị ngwa nke usoro ndị ahụ dị ka agba nkịtị, dịka o kwere mee ka e nwee ike, ọnụọgụ kachasị nke ọnya na-egbuke egbuke, nsụgharị dị nro ma dị ire, njedebe ọkụ na ọtụtụ ndị ọzọ, ababeghị ntakịrị ruo ọtụtụ afọ. Ka ọ dịgodị, oge a enyela anyị ọnọdụ ọhụrụ, nke ụmụ agbọghọ ndị chọrọ ịgbanwe ọdịdị ha.
Usoro agba agba agba 2018
Usoro nke usoro oge dum bụ ihe na-acha ọkụ - usoro eji agba agba, nke kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwanyị niile, n'agbanyeghị afọ ole ha dị, agba agba nke curls, ogologo nkpuchi na ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'enyemaka nke ọkụ, ị nwere ike ịnweta uzo kachasị mma na mmetụta nchacha nke ga-adị mkpa na ọnọdụ ọ bụla. Na mgbakwunye, usoro mmemme, dịka ọmụmaatụ, ombre ma ọ bụ sombra, ohi zuru ezu ma ọ bụ balage na ụdị ndị ọzọ dị mkpa .
Agba agba agba agba nke 2018 bụ ihe na-adịghị ewu ewu, Otú ọ dị, n'òtù nke ụmụ agbọghọ na ọ hụkwara ndị na-agbapụ ya. Na oge a, a gaghị atụ aro ka agbacha isi ntutu isi na-enwu enyo, jiri ụzọ eji agba agba, nke nwere ụda olu na ụda.
Ihe ejiji na agba agba 2018
N'oge ọhụrụ, ọrụ isi nke onye na-edozi isi ga-enye ụda. N'ihi nke a, ntutu na agba agba nke 2018 jikọtara mmetụta nke ịmị ọkụ na ọkụ. Ọtụtụ mgbe a na-ahọrọ ụdị ntutu isi akpụkpọ ụkwụ na usoro ndị na-acha nwayọọ nwayọọ, nke na-emepụta ihe na-egbuke egbuke ma na-adọrọ mmasị maka oge ọ bụla.
Agba agba agba 2014
Uwe ejiji - oge oyi-oyi 2016-2017
Dress na a mmiri ịke 2013
Oge oyi oyi Jaketị
Ngwongwo ndi ozo rue 2017 - ihe ndi kachasi mma n'uwa
Nchịkọta Afọ Ọhụrụ site Willows Roshe 2015
Akpụkpọ ụkwụ agbaji gel-lacquer
Ucha ejiji - mgbụsị akwụkwọ 2016
Ejiji ejiji - mmiri 2015
Prince Harry gbara ajụjụ ọnụ na Newsweek banyere ndị eze, ụzọ ndụ na ihe nchekwa dị egwu
Kedu otu esi ewepụ ihe dị na kettle eletrik?
Gout - ọgwụgwọ
Garlic - ọma na ihe ọjọọ maka ọgwụgwọ ọrịa na ọrịa
Kedu ka otu afọ iri na ụma si efu?
Ntughari nke efere
Kalịnda mmechi - iji aka gị dochie ya
Cystitis na Ime - Nwunye Nchekwa na Ntuziaka 4 kachasị mma
Uwe ihe nkiri
Ụlọ mgwakota agwa
16 foto akụkọ ihe mere eme, ebe dị elu na-aga n'ihu ọbụna taa!
Ụlọ elu ụgha na-adọrọ adọrọ
Fytir ke Egypt
Uwe ejiji ogologo
Channing Tatum na Jenna Devan gosipụtara otú ha si eji ememe ha na Hawaii
Ntughari nke honey suckle cuttings na mmiri
Kedu ihe bara uru maka millet?